Saturday March 28, 2020 - 12:29:40 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Farmaajo ayaa ku dhawaaqday in ay la wareegtay maamulka dugsiga 15-ka May oo kuyaal degmada Wardhiigleey ee magaalada Muqdisho.
War kasoo baxay wasaaradda Waxbarashada ayaa lagu amray guddiga tacliinta dowladda Masar oo gacanta ku hayay 15-ka May in ay baneeyaan wixii ka horreeya 30-ka bisha soo socota ee April.
Wasaaradda Waxbarashada ayaa warsaxaafadeedka ay soo saartay ku sheegtay in iskuulka loo bedeli doono xarun lagu tababaro dumarka macallimiinta ah.
Tallaabadan ay DF-ka qaadday ayaa lagu sheegay in ay tahay mid lagu raalligelinayo dowladda Xabashida Itoobiya oo khilaaf ku saabsan qeybsiga biyaha Webiga Niil uu kala dhaxeeyo dowladda Masar.
Iskuulka 15-ka May waxaa si lacag la'aan ah wax ugu baranayay boqolaal Arday ah danyar ah, guddiga tacliinta ee dowladda Masar ayaana bixinayay dhammaan wixii qarashaad ah ee ay ubaahanyihiin ardayda iskuulka 15-ka May.
Xildhibaan Mahad Salaad oo katirsan baarlamaanka dowladda Federaalka ayaa tallaabadan ay qaadday dowladda Federaalka ku sheegay mid lagu raalli gelinayo xukuumadda Addis Ababab isagoo carabaabay in tani ayaan darro ku tahay Villa Somalia.
"Amar lagu raali gelinayo Itoobiya oo lagu xiray Iskuulkii 15 May ee dowlada Masar maamuleysay, ardayda dhigatana lacag la’aan wax lagu bari jiray, Horay hadii Qalbi Dhagax loogu dhiibay, Dekadihii dalka lagu wareejiyay, Qaraarkii Jaamacada Carabta ee dowlada Soomaaliya horay u taageertay amarkooda looga laabtay maxaa haray”ayuu yiri Xildhibaan Mahad Salaad.
Isbuucii lasoo dhaafay ayay dowladda Farmaajo sheegtay in ay dhax dhaxaad ka tahay khilaafka udhaxeeya Masar iy Itoobiya kaas oo ku saabsan dhismaha biya xireenka Wabiga Niil ay Itoobiya ka dhisayso.
Kadib socdaalkii Xasan Cali Kheyre ee Addis Ababa ayuu banaan usoo baxay sida dowladda Farmaajo madaxda ka yahay utahay Farac kamid ah Itoobiya, sanaddii 2018 ayay dowladda Federaalka usaxiixday Itoobiya in ay lawareegto 4 kamid ah dekadaha Soomaaliya.